इन्स्टाग्राममा फलोअरहरू पाउनुहोस् 🥇 फलोअर्स अनलाइन
इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू पाउनुहोस्
दुबै घरेलू प्रयोगकर्ता र पेशेवरहरू डिजिटल मार्केटिंग तिनीहरू जहिले पनि उत्तम उपकरणहरू पाउनको लागि प्रयास गर्छन् अनुयायीहरू इन्स्टाग्राममा। यद्यपि यो सामाजिक नेटवर्कको नयाँ एल्गोरिदमले यस सम्भावनालाई अझ गाह्रो बनाउँदछ, त्यसैले त्यसो गर्न सुरक्षित चरणहरू छनौट गर्नु आवश्यक छ।
इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा धेरै काम र धेरै घण्टा आवश्यक पर्दछ। वास्तवमा, यो जस्तो देखिन्छ सरल छैन। यद्यपि हामी प्राविधिकहरूको एक श्रृंखला प्रयोग गर्न सक्दछौं जुन पक्कै अनुयायीहरूको संख्या बढ्नेछ हाम्रो प्रोफाइल मा। तर यदि हामी यसलाई बढावा दिन चाहन्छौं भने अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू खोजी गरिरहेका छन् इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्.
ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुहोस्
हाम्रा प्रकाशनहरूलाई ट्याग गर्नको लागि ह्यासट्यागहरू उत्तम विकल्प बनेका छन्। जे भए पनि, तपाइँले उनीहरूलाई राम्रोसँग कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ जसले गर्दा उनीहरूले ठूलो प्रभाव पार्दछ। तपाईं प्रत्येक प्रकाशनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ह्यासट्यागको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। थप रूपमा, हामी यसको प्रयोगमा जानु हुँदैन, केहीको साथ 10 - 12 प्रकाशन द्वारा पर्याप्त आदर्श फरक छ तिनीहरूलाई सधैं दोहोर्याउँदैन र यसैले अधिक पहुँच हुन्छ।
अन्य प्रोफाइलसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्
अन्य प्रोफाइलहरूसँग अन्तर्क्रिया इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू पाउनको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने विधिहरू मध्ये एक हो। टिप्पणीहरू बनाउने र अन्य प्रकाशनहरूमा लाइक दिने प्रक्रियाहरू हुन् जुन नयाँ व्यक्तिहरूलाई तपाईंको प्रोफाइलमा आकर्षित गर्दछ। जबसम्म यो पूर्ण स्वाभाविक अन्तरक्रिया हो र जसमा स्प्यामलाई वेवास्ता गरिन्छ।
एक अन्तर्क्रिया प्रविधि हुन सक्छ अरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम खाताहरू. यस तरीकाले, संयुक्त र्याफलहरू गर्न सकिन्छ, धेरै खाताहरूको बीचमा घटना आयोजना गर्ने, अन्य प्रकाशनहरूलाई ईन्धन गर्ने, सामग्री साझा गर्ने जहाँ पारस्परिक उल्लेख छ र अनुयायीहरूसँग बहस खोल्न सकिन्छ इत्यादि।
Instagram विज्ञापनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यस सामाजिक नेटवर्कमा हाम्रो दृश्यता बढाउन इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू एक उत्कृष्ट उपकरण हो। यसको लागि धन्यबाद, हामी लक्षित गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरू विस्तृत रूपमा विभाजित छन्। यो फेसबुक विज्ञापनबाट धेरै सजिलै ब्यवस्थित गरिएको छ र वास्तवमा यस रूपमा कार्य गर्दछ विज्ञापन विज्ञापन इन्स्टाग्राम छविहरू र भिडियोहरूमा आधारित।
इन्स्टाग्राम विज्ञापनको प्रयोग अनुयायीहरूलाई व्यवसाय प्रोफाइल वा आकर्षित गर्नका लागि आदर्श हो ब्रान्डहरू.
भिडियोहरू र लाइभ कथाहरू बनाउनुहोस्
भिडियोहरू र लाइभ कथाहरू पनि धेरै रोचक हुन्छन् जब यो इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू लिन आउँदछ। अचम्म मान्नु पर्दैन, प्रत्यक्ष भिडियोहरू प्रायः उत्तम स्थानहरूमा अवस्थित हुन्छन् इन्स्टाग्राम। साथै, दुबै उपकरणहरूले अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई नजिकको र सुरक्षाको अनुभूति दिन्छ। यो धेरै सम्भावना हुन्छ कि दैनिक वा कम्तिमा2-3हप्तामा एक पटक लाइभ भिडियोले अनुयायीहरू प्राप्त गर्दछ।
गुणवत्ता सामग्री अपलोड गर्नुहोस्
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यो स्पष्ट छ यदि हामी हाम्रो प्रोफाईलमा गुणवत्ता र लोकप्रिय सामग्री अपलोड गर्छौं भने हामी धेरै अधिक अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्दछौं। सामान्यतया, तिनीहरू एकदम सेल्फी मन पराउँछन्, विशेष क्षण को फोटोहरु वा परिवारमा, ईभोक्याटिभ टेक्स्ट र प्रेरक वाक्यांशहरू सहित छविहरू, आदि।
सत्य यो हो कि त्यहाँ धेरै चालहरू र सल्लाहहरू छन् इन्स्टाग्राममा अधिक अनुयायीहरू प्राप्त गर्नका लागि। तिनीहरूलाई अभ्यासमा राख्दै हामी व्यक्तिहरूलाई हाम्रो प्रोफाइलमा आकर्षित गर्नेछौं।
ब्राजिलमा इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्
कम्पनीहरु को लागी सामाजिक नेटवर्कहरु